Ukuswayipha Komphakathi: Isipiliyoni Somsebenzisi Esihlakaniphile Seminikelo Yokunikela | Martech Zone
Ukuswayipha Komphakathi: Isipiliyoni Somsebenzisi Esihlakaniphile Seminikelo Yokunikela
ULwesine, May 22, 2014 NgoLwesibili, ngo-Mashi 22, i-2016 Douglas Karr
Izikhathi eziningi ekukhangiseni, kuwumkhuba omuhle ukubheka inqubo yokuguqulwa, ukukhomba zonke izinyathelo nokuziphatha, nokuqonda ukuthi yiziphi izixazululo ezingasetshenziswa ukunqoba lokho. Okwezinhlangano ezisiza umphakathi, kungukunqamula phakathi kwensizakalo eyenza lo msebenzi nesikhathi nendawo yomnikelo.
Lesi sixazululo esivela kuMisereor, the Isilayidi Somphakathi, yisixazululo esihlakaniphile sokuxazulula izingqinamba ezimbili ezihlukile:
Abantu nje abasaphathi mali.
Ibhokisi lomnikelo alinikezi ukuqonda ngalokho okufeziwe ngemali.
Faka i-Social Swipe. Ividiyo ixhumana nokuswayipha kwekhadi lesikweletu lomuntu onikela ngemali. Njengoba beswayipha futhi benikela ngokudla, kusikwa ucezu lwesinkwa. Noma njengoba beswayipha futhi benikela ukulwa nokushushumbiswa kwabantu, amabhondi abambe izandla zomunye umuntu aphukile. Ngempela yisixazululo esimangalisayo.
Tags: iminikelo yokusizaUthandoUkuziphatha komnikeloIminikeloinhlekisaSwayipha umphakathi
Inqolobane: Ukuxoxa izindaba kwe-iPad